Iwe unoda kugadzira Linux zvinoshandiswa? Iri peji rinogona kukubatsira | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Zvimwe Linux
Alan Pope kubva kuCanonical yakatanga peji rewebhu ine kufona inokoka vanhu kuti vagadzire zvinoshandiswa zveLinux. Muchokwadi, kunyangwe paine mashoma nzvimbo umo musina yakavhurwa sosi imwe sarudzo, uye mune dzakawanda zviitiko zvine huwandu hwehunhu hwakaenzana kana kupfuura mukwikwidzi wakasarudzika, hapana whatsapp kana houseparty. Zvirinani kuti hapana mupfungwa yekuti vanhu vanofarira kuishandisa.
Ini ndoda kujoina kufona kwaAlan iniKukukoka iwe kuti utitaurire mune yemafomu fomu, ndeapi maficha aungade kuve nawo paLinux Pfungwa dzese dzinogamuchirwa, asi ini ndinokukoka iwe kuti uve wepakutanga sezvinobvira.
1 Iwe unoda kugadzira Linux zvinoshandiswa? Tarisa peji ino
2 Ungatanga sei kugadzira kunyorera kweLinux
2.1 Kudzidza zviwanikwa zvinyorwa
2.1.2 KDE Sisitimu
Iwe unoda kugadzira Linux zvinoshandiswa? Tarisa peji ino
Alan akagadzirwa Peji rimwe kuti iwe unogona kutarisa pano. Mariri, anotsanangudza chinangwa chekufona.
Linux desktop nevashandisi venhare vane chishuwo chine hutano chesoftware nyowani. Zvishandiso zveLinux zvekushambadzira uye zvekuchengetedza zvinoshomeka mashandisirwo zvichienzaniswa nevavanomiririra.
Kazhinji kazhinji (vanofarira Linux) vanowira mumusungo wekugadzira mamwe maLinux. Hatidi chero kugoverwa kweLinux. Mira kugadzira kugoverwa kweLinux, ita maapplication panzvimbo
Muchinyorwa zvakare debunks nhema yekuti vashandisi vemahara software vanoramba kubhadhara chirongwa uye vanonongedzera kune akawanda emahara magwaro nezve maitiro ekudzidza kuzvironga.
Ungatanga sei kugadzira kunyorera kweLinux
1) Zvibvunze kana paine chirongwa chaunoshuvira kuvepo.. Chokwadi kune vamwe vanozvida.
2) Wedzera iyo ecosystem: Iko kune mhando yepiramidhi scheme inoshandiswa mukugadzira kunyorera. Iwe unotora kurudziro kubva kune iripo kodhi yekushandisa, uye iyo yaunonyora inokurudzira vashanduri vatsva.
3) Iva nehunyanzvi: Izvo hazvisi zvekuve nevane makumi mana evhidhiyo edhita uye gumi hofisi masutu. Iwe unofanirwa kutsvaga mhinduro nyowani kumatambudziko matsva kana matambudziko ekare. Icho hunyengeri hachisi chekuvhura sosi yakavhurika, yakasarudzika-yakatarisana neimwe nzira kuWhatsApp, ndezve kugadzira mhinduro yepamusoro-soro yekuti vanhu vataurirane.
4) Vaka nharaunda: Vanhu kutenderera pasirese vanouya pamwechete kutenderera mazano uye mapurojekiti. Iwe unogona kuwana rubatsiro munharaunda dziripo uye panguva imwechete tanga imwe nyowani.
5) Gadzira hunyanzvi hutsva: Maitiro-ekugadzirisa mhinduro, kusiyana nekuverenga dzidziso uye kuteedzera / kunama kodhi, inokudzidzisa kuona matambudziko nezvikamu zvacho uye kuzviratidza uchishandisa mitauro inoshandisa mitemo yakaoma.
Kudzidza zviwanikwa zvinyorwa
Iyo GNOME projekiti inoitisa imwe yeanonyanya kufarirwa mamiriro edesktop mune yemahara software yenyika. Miraibhurari yaro yemifananidzo ndiyo hwaro hwemamwe madhesiki akadai seMate, Cinnamon, uye XFCE. Kubva pane urwu runyorwa ndiyo chete sosi yauinayo zvinyorwa zvako uyen Spanish.
KDE ndiyo ingangoita yakakwana kwazvo ecosystem yepasirese pasirese yemahara, uye iine mavhezheni eWindows. Yake chimiro chinoshanda pamwe neC ++ mutauro uye Qt maraibhurari. Zvinyorwa inogona kubvunzwa pano.
Iko kugoverwa kweLinux kwakatemerwa kuve imwe nzira kune Windows uye Mac OS. Iyo ine yayo yega sisitimu yekugadzira uye kugovera kunyorera.Iyo zvakare inobvumidza ivo vagadziri kuti vawane mari.
Zvinyorwa inowanikwa pano
Munyaya ye kuda kugadzira mapakeji anogona kushandiswa zvisinei nekuparadzirwa kana desktop, tTine mafomu epasirese epakeji
Yakanga iri yekutanga yezvisikwa zvese uye zvoga zvirimo mapakeji mafomu (Izvo hazvidi kushandisa kutsamira kweiyo inomiririra sisitimu inoshanda). Iwe unongofanirwa kurodha pasi application, uipe mvumo uye umhanye nayo nekudzvanya kaviri.
Zvinyorwa zvekugadzira mapakeji mune iyi fomati zvinogona kuva ona pano.
Iyo ndiyo fomati yakasarudzika yemazhinji akavhurwa sosi mafomu. Mune kumwe kugovera kwakadai seFedora, KDE Neon kana Manjaro, iwe haudi mamwe matanho ekuwedzera ekuisa FlatPak mapakeji, mune mamwe zvingangoda mamwe matanho ekugadzirisa.
Zvinyorwa zvako inowanikwa pano.
Iyo yeCanonical yepasirese, yega-ine pasuru fomati. Mune zvigadzirwa zveUbuntu neManjaro zvakagadziriswa nekukasira, nepo mune mamwe mapurogiramu iwe unofanirwa kuisa maneja wepakeji. LChitoro cheSpap ndiyo sarudzo inosarudzika yevanogadzira software kugovera zvinyorwa zvavo zveLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iwe unoda kugadzira Linux zvinoshandiswa? Iri peji rinogona kukubatsira
Kupfuura mashandisiro matsva, ini ndinofarira kuti anbox ivandudzwe kuitira kuti rishande zvakafanana neWINE, saka mapurojekiti senge Ubuntu kubata angave nemikana yakawanda achienzaniswa neApple neIOS ivo vasingawani nharaunda hombe inogadzira maapplication erudzi urwu rwehurongwa .
Andrioid 11 Developer Ratidziro 3 yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo uye nhau